Kooxda FC Banaadir oo ku guuleysatay Koobka Champions ee Minnesota -
Kooxda kubadda cagta ee Banaadir ayaa ku guuleysatay koobka Champions ee Minnesota kadib markii ay 5-4 ay uga badisay kooxda Somali United ciyaartii final-ka ahayd ee ka dhacday magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Tartankan ayaa loo dhigaa Afarta kooxood ee iyagu ugu dhibcaha badnaa horyaalka Ciyaartoyda culusaatay ee loogu magac daray Jiirooni ee la soo gebagabeeyay bishii hore ee August.
Ciyaar aad u adkeyd ayna labada koox soo bandhigeen xirfad ayaa 90-kii daqiiqo kadib waxay ku dhamaatay barbar dhac ah 2-2, waxaana la isla aaday rigooreyaal ama gool tuur. Guushiina waxay halkaas ku raacday oo koobkii hanatay kooxda FC Banaadir, kadib markii ay 5-4 rigoore yaal ah uga badisay kooxda Somali United .
Maxamed Carab oo isagu ah tababare iyo ciyaartooy isagu macalin u ah kooxda FC Banaadir ee koobka qaaday ayaa isagu kooxdiisa u gudoomay koobkii iyo abaal-marintii ay kooxdiisu mutaysatay. Macalin Maxamed Carab ayaa wargeyska Tumso Times u sheegay in uu aad ugu faraxsan yahay guusha ay kooxdiisu gaartay, isaga oo aad iyo aad u amaanay maamulka qabtay horyaalka oo uu ugu horeeyo Mudane Adam Ugas iyo waliba sidii wanaagsaneyd ee loo soo agaasimay koobka Champions ee Minnesota.
C/Risaaq Yare oo ah ciyaartoy da’da yar, ahna laacib iyo ciyaartoy caan ka ah gobolka Minnesota iyo waliba bahda ciyaaraha ee qaarada Waqooyiga America ayaa isagu ku guuleystay abaal-marinta ciyaartooygii ugu gool dhaliska badnaa, waxaana C/Risaaq Yare la gudoonsiiyay kabo cusub oo ah nooca ama naqshad cusub oo ay hadda soo saartay shirkadda Nike.
Sidoo kale C/Risaaq Yare ayaa noqday ciyaartooygii ugu wanaagsanaa ama MVP-ga koobka Champions ee Minnesota. Ciyaartoyga C/Risaaq Yare ayaa haddaba isagu biladan ku mutaystay dadaal joogto ah oo uu muujiyey mudadii ay socotay ciyaartii kama dambeysta ahayd ee ay kooxdiisu koobka ku qaaday.
Koobkan oo ay aad iyo aad ugu riyaaqeen dhamaan ciyaartooydii iyo kooxihii ka qayb galay ayaa waxaa lagu qabtay garoonka kubadda cagta ee Currie Park iyada oo si wanaagsan loo soo abaabulay. Waxaa soo agaasimay koobkan Adam Ugas oo isagu ah tababare iyo shaqsi aad uga dhex muuqda bahda isboortiska ee gobolka Minnesota.
Related Items:Featured, minneapolis, Somali community, Somali Minneapolis